Su'aalaha La Weydiiyo - Beijing Anbesec Technology Co., Ltd.
1) Sidee buu u shaqeeyaa qalabka baarista kuleylka toosan?
Waa nooc nooc-khad ah oo lagu ogaanayo kuleylka heerkulka go'an ee loo isticmaalo bay'adaha ganacsiga iyo kuwa warshadaha. Xariggan toosan wuxuu dabka ka ogaan karaa meel kasta oo dhererkiisa oo dhan ah waxaana lagu heli karaa heerkullo badan.
Khadka Tooska ah ee Heer Detection (LHD) ayaa asal ahaan ah xarig laba-geesood ah oo lagu joojiyo dhamaadka-khadka-diidmada (caabbintu way ku kala duwan tahay dalabka). Labada koronto waxaa kala saaray caag polymer ah, oo loogu talagalay in lagu dhalaaliyo heerkul gaar ah (badanaa 68 ° C ee dhismaha codsiyada), taas oo keenta in labada buundo gaabiyo. Tan waxaa loo arki karaa inay tahay isbeddel ku yimid iska caabinta siligga.
2) Muxuu ka kooban yahay nidaamka kuleylka toosan?
Xarkaha dareeraha kuleylka, qaybta xakamaynta (qaybta is-dhexgalka), iyo cutubka qaybta (EOL box).
3) Imisa nooc oo kala duwan oo ah fiilada lagu ogaanayo kuleylka toosan?
Nooca dhijitaalka ah (Nooca beddelka ah, Dib loo soo celin karin) iyo nooca analogga ah (Dib loo heli karo). Nooca dhijitaalka ah waxaa loo kala qaadaa saddex kooxood oo kala ah codsiyo, nooca caadiga ah, nooca CR / OD iyo nooca EP.
4) Maxay yihiin faa iidooyinka ugu waaweyn ee nidaamka?
Rakibaadda iyo dayactirka fudud
Digniinta beenta ugu yar
Waxay bixisaa digniin-bixin meel kasta oo ka mid ah xarigga gaar ahaan jawiga qallafsan iyo halista leh.
La jaan qaadaya garashada iyo garashada caadiga ah iyo qalabka dabka ka diga
Waxaa lagu heli karaa dherer kala duwan, dahaarka fiilada iyo heerkulka digniinta ee dabacsanaanta ugu badan.
5) Maxay yihiin codsiyada caadiga ah ee nidaamka ogaanshaha kuleylka?
Soosaarida korantada iyo warshadaha culus
Saliida & Gaaska, warshadaha Petrochemical
Gadiid: Jidka hoose ee jidadka iyo marinnada marinnada
Haanta keydka saqafka
Qaybaha injiinka gawaarida
6) Sidee loo doortaa LHD?
Qaylo-dhaanta aan la rabin waxay dhici kartaa marka fiilada lagu rakibo cabirka alaarmiga si loogu dhawaado heerkulka deegaanka. Sidaa darteed, markasta u oggolow ugu yaraan 20°C inta udhaxeysa heerkulka jawiga iyo heerkulka alaarmiga.
7） Ma u baahan tahay in la tijaabiyo rakibida kadib?
Haa, qalabka wax lagu baaro waa in la tijaabiyo ugu yaraan sanadkiiba marka la rakibo ama la isticmaalo.
Marabtaa inaad ogaato waxbadan?